नेपालमै भयो यस्तो: अनुहारै नहेरी फेसबुक र फोनबाट पर्यो लभ अनि बिहे, अन्तिममा रुवाबासी – AB Sansar
नेपालमै भयो यस्तो: अनुहारै नहेरी फेसबुक र फोनबाट पर्यो लभ अनि बिहे, अन्तिममा रुवाबासी
October 30, 2020 adminLeaveaComment on नेपालमै भयो यस्तो: अनुहारै नहेरी फेसबुक र फोनबाट पर्यो लभ अनि बिहे, अन्तिममा रुवाबासी
डोटीको -बडीकेदार गाउँपालिका–१, बिपीनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो। फोन गर्नेले बाटोमा एकजना केटा र दुई केटीको झगडा भइरहेको सूचना दिए । झ’गडा गरिरहेकामध्ये एक केटीले आ’त्म ह’त्या गर्न खोजेको सूचना तिनले प्रहरीलाई दिए। इप्रका इन्चार्ज भरत चौधरीले तुरुन्तै टोली त्यहाँ पठाए । प्रहरीले तीनैजनालाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे बुझ्यो। ‘फेसबुकबाट त्यो केटाको एउटी केटीसँग ‘लभ’ परेको रहेछ, दुवै बिहे गर्ने तहसम्म पुगेका रहेछन्’,। घ ट नाबारे सुनाउँदै इन्चार्ज चौधरीले भने, ‘तर केटीका आमाबुवाले केटा विवाहित भएको र उनकी श्रीमतीले अर्को बिहे गरेको थाहा पाएपछि बिहे गर्न मानेनछन्। ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,****
त्यसपछि केटाले साथीमार्फत् अर्की केटीसँग परिचय भएर फोनमा बोल्दा बोल्दै माया बसेछ।’ केटाले अन्ततः अर्की केटीलाई पनि बिहे गर्ने तहसम्म पुर्याए। दुवै बिहे गर्न राजी भए। छोरीलाई खुसी साथ राखेर पढाइदिने बाचा गरेपछि आमाबुवाले पनि स्वीकृति दिए। आमाबुवाले टीकाटालो गरिदिएपछि उनीहरु बिदाइ भएर हिँडे। यो खबर पहिलेकी केटीले थाहा पाइन्। त्यसपछि उनी दौडँदै बाटोमा आएर छेकिन् उनले आफूलाई धोका दिएको भन्दै केटासँग झ गडा थालिन्। उनले आफूसँग पनि बिहे गर्नुपर्ने अडान राखेर नत्र झु ण्डि एर म र्ने ध म्कीसमेत दिइन्। ‘दुवै केटीको उमेर १७/१८ वर्ष मात्रै छ। बिहे हुने त कुरै भएन’ इन्चार्ज चौधरीले भने, ‘दुवै केटीका अभिभावकलाई बोलाएर जिम्मा लगाइदियौँ।’
केही दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १८ वर्षीय केटा र १९ वर्षीया केटीको जोडी आयो। भर्खरै एसइई दिएका उनीहरू मोबाइलबाटै नजिक भएपछि अभावकको आँखा छलेर भागे। केही दिनपछि केटाको घर पुगे। जात नमिलेको भन्दै केटीपक्षले केटाका अभिभावकलाई धम्की दिन थाले। दुवै डराएर प्रहरी चौकी हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। ‘२० वर्ष नपुगी बिहे हुँदैन भन्ने जानकारी रहेनछ उनीहरूलाई’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर धामीले भने, ‘दुवैले अब बिहे भइसकेपछि कसरी बदर हुन्छ? भनेर जि द्धी गर्न थाले।’ धेरै प्रयासपछि सम्झाएर उनीहरूलाई प्रहरीले अभिभावकको जिम्मा लगायो। ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,****
बाच्न निकै प्रयास गरिन तर सकिनन ज्ञानकुमारी !
एक हुल युवकको आ’क्र’म’णमा परि ग’म्भी’र घा’इ’ते भएका भरत बाच्न निकै प्रयास गरे तर सकेनन !